कता कता मनाइन्छ होली पर्व ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperकता कता मनाइन्छ होली पर्व ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
कता कता मनाइन्छ होली पर्व ?
आज काठमाडाैं उपत्यकासहित पहाडी जिल्लाहरूमा हाेली/फागु पर्व मनाइँदै छ । प्रायः फागुनमा पर्ने हाेली पर्व यसपालि चैत महिनामा परेकाे छ । भाेलि तराईका जिल्लामा हाेली खेलिनेछ । फागु पूर्णिमालाई उपत्यका र पहाडी भेगमा ‘फागु’ भन्छन् । तराईका मानिसहरू यसलाई ‘होली’ भन्ने गर्छन् ।
खासगरी नेपाल र भारतमा याे पर्व हर्षाेल्लासका साथ मनाइन्छ । माया, प्रेम र सद्भाव झल्काउने तथा उमङ्ग र उत्साह थपिदिने होली एकआपसमा रङ र अबिर दलेर, पानी छ्यापाछ्याप गरेर मनाउने गरिन्छ ।
वसन्तपुरमा रङ्गीचङ्गी कपडाका टुक्राहरू झुण्डयाइएको तीनतले चीर ठड्याएपछि वसन्त ऋतुको आगमनलाई स्वागत गर्न भनेर फागुन शुक्ल अष्टमीदेखि पूर्णिमासम्म विभिन्न रङ र अबीर एकआपसमा छ्याछ्याप गरेर होली खेल्ने परम्परा छ । होलीकै भोलिपल्टबाट ऋतुहरूको राजा वसन्त ऋतुको आगमन हुने विश्वास गरिन्छ ।
विशेषगरी तराईमा विशेष उल्लासका साथ मनाइने होली पछिल्लो समयमा नाचगान गरेर, साथीभाइ एकआपसमा मिलेर मनाउने गरिएको छ । असत्यमाथि सत्यको विजय भएको उत्सवका रूपमा रङ दलेर यो पर्व मनाउने गरिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
होलीका बेला भाङको लड्डु, घोटुवालगायत खाएर रमाइलो गर्ने चलन छ । पहिले हिन्दु धर्मका अनुयायीले मात्र मनाउने भए पनि पछिल्लो समय हरेक धर्म, जात र सम्प्रदायले होली मनाउन थालेका छन् ।
भारत र नेपालबाहेक विश्वका थुप्रै देशमा होली पर्व मनाइन्छ । एसियाली देशदेखि अमेरिका, युराेप र अफ्रिकासम्म हर्षोल्लासका साथ होली मनाइन्छ ।